Madagascar Matin » Ambatondrazaka – Tovovavy iray nohanin’ ny voay
Tovovavy iray 18 taona no tsy misy tanana ila intsony. Ny faran’ny herinandro lasa teo iny dia tovovavy mpaka herana fanamboarana harona sy tsihy eny amoron-drano ireny no nohanin’ny voay raha izy handeha hanao ny asa fanaony isan’andro iny tao Ambakireny Tsaratanàna, ao anatin’ny Distrikan’Ambatondrazaka. Teo am-panapahana ilay tahona herana iny indrindra anefa izy no nosamborin’ny voay be tampoka ka ny tanany no tratran’iny biby ity raha ny loharanom-baovao azo avy any an-toerana. Ny sandriny mihitsy no tafiditra tany am-bavan’ny voavy ary dia niezaka nanohitra izy ka avy hatrany dia tapaka ny tanany iray manontolo. Mbola tafatsoaka nanavotra ny ainy ity tovovavy ity. Nentina notsaboina tao amin’ny hôpitaliben’Ambatondrazaka izy ary dia tsy maintsy nandalo fandidiana ny tenany.